Cheap Drawing aluminum alloy extruded akụkụ ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Ouzhan
Mkpa ịbịaru usoro nke alloy alloy
Nnennen waya ịbịaru
Na-ezo aka nhazi nke ahịrị kwụ ọtọ n'elu efere aluminom site na esemokwu n'ibu.
O nwere oru abuo nke iwepu nkpu n’elu ala aluminom na icho elu ala nke aluminom. E nwere ụdị abụọ nke ogologo waya ịbịaru: waya na-aga n'ihu na waya na-aga n'ihu. Enwere ike inweta usoro ihe eji eme ihe na-aga n'ihu site na paches ma ọ bụ nchara nchara nchara site na ntanetị na-aga n'ihu n'elu efere aluminom (dị ka ntugharị akwụkwọ ntuziaka n'okpuru ngwaọrụ dị ma ọ bụ iji ihe nhazi iji kpochapụ ahịhịa waya na aluminom) . Site na igbanwe waya dayameta nke ahịhịa nchara nchara, enwere ike nweta textures nke ọkpụrụkpụ dị iche iche. A na-ejikarị usoro silk na-arụ ọrụ na igwe ihicha ma ọ bụ igwe asacha. Production ụkpụrụ: A na-eji usoro abụọ nke wiil dị iche iche na-agagharị n'otu ụzọ ahụ. The elu set bụ a ngwa-ngwa-agba gburugburu egweri ala, na ala set bụ a ngwa-ngwa-agba gburugburu roba. Aluminom ma ọ bụ aluminom alloy plate gafere ụzọ abụọ nke rollers ma kpochapụ ya. Ahịrị ogologo ahịrị kwụ ọtọ.
Random ụkpụrụ ịbịaru
Ọ bụ ụdị ihe silk na-adịghị ahụ anya, nke na-adịghị ahụ anya nke enwetara site na ịkwaga ma na-ete efere aluminom azụ na azụ n'okpuru ahịhịa ọla kọpa dị elu. Kinddị nhazi a nwere ihe ndị dị elu dị n'elu ala aluminom ma ọ bụ aluminom alloy.
N'ozuzu, a na-eme ya na igwe nhicha ma ọ bụ igwe na-ehicha ya. Jiri ngwangwa axial nke otu nke elu nke egweri rollers ka ahịhịa n'elu aluminom ma ọ bụ aluminom alloy plate, See usoro ife.
A na-akpọkwa ya ntụgharị anya, nke bụ ụdị ụdị silk nke enwetara site na iji nkụkọ ma ọ bụ igweri wheel wịịl iji wụnye igwe na-egwu mmiri, na-agwakọta mmanụ polishing na manu oku, ma na-agbanwe ma na-eme ka elu nke aluminom ma ọ bụ aluminom alloy. A na-ejikarị ya eme ihe maka nhazi nke ihe ịrịba ama na obere akara.
Ọ na-eji obere moto nwere mmetụta gburugburu na aro ma na-edozi ya na tebụl, n'ihe dị ka ogo 60 site na nsọtụ tebụl ahụ.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-eme paịlị nwere ngwongwo aluminom edozi maka ịpị tii, na ihe nkiri polyester nwere akụkụ kwụ ọtọ na pallet iji belata asọmpi eri. N'iji ntụgharị nke mmetụta na usoro nke ụgbọ ịnyịnya, a na-ehichapụ usoro eri nwere otu obosara n'elu efere aluminom.
Ọrụ nke aluminom alloy waya ịbịaru
Mmetụta nke enwetara site na eserese waya ga-enwe ezigbo convex na mmetụta concave. Ihe osise waya bụ usoro ndozi. Ebe ọ bụ na enwere ụfọdụ ncha n'elu igwe ahụ, jiri igwe na-ese ihe iji mee ka ọkọ na-agbanwe agbanwe na elu dum (belata mgbidi ahụ) --- kpuchie ncha ahụ, ọ kachasị mma ịghara arụmọrụ). Ma nchapu siri ike izere, ya mere a na-ejikarị ya eme ihe. Ihe osise ọ bụghị nanị na ị na-ehichapụ ntụpọ n'elu ala aluminom, kamakwa ọ nwere mmetụta nke ịchọ mma nke ọdịdị aluminom. (O nwekwara usoro "ọkụ na-ekpo ọkụ" (anodized aluminum transfer), nke nwekwara ike ịme mmetụta yiri nke ahụ n'elu akụkụ plastik.)
Dika akụkụ nke alumini nwere ike idi na gburugburu ebe obibi ma obu zukọta ya na ndi ozo nke ihe di iche iche, iji meziwanye ma jide n'aka na mmegide nke ejiji, mmegha nke corrosion na visibiliti nke akuku, a ghaghi ime ka uzo magnesium alloy mechie. Nkwupụta ahụ ga-emetụta spraying na-esote. N'oge usoro n'ichepụta ihe, akụkụ ahụ nwere ike imetọ ya site na ụfọdụ mmetọ dị ka griiz, oxides, lubricants na okwu mba ọzọ, a ga-ewepụkwa adịghị mma ndị a fọdụrụnụ.
N'ozuzu, a ga-ekewapụta akụkụ nke alloy alloy n'akụkụ anọ: nhicha igwe, nhicha ihe nhicha, nhicha mmiri na nhicha acid. A pụrụ iji usoro ndị a mee naanị ma ọ bụ na nchikota. Lezienụ anya n'inye abrasive ntụ ntụ na mmiri n'oge usoro nchacha ahụ, na nchacha ahụ ga-enwu gbaa!
Ihe onwunwe Aluminom, igwe anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ nwere ike ịchacha ma nụchaa
Ojiji Dị ka chọrọ maka ọgwụgwọ okpomọkụ dị iche iche
Nke gara aga: Black anodized 6061-T6 aluminum alloy CNC machining akụkụ
Osote: Electroplated aluminum alloy machined akụkụ